मोडेर्नाले बनाएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोपले प्रतिरोधी क्षमता बढायो, अन्तिम चरणको परीक्षण शुरु हुँदै
समाचार बुधबार, असार ३१, २०७७
अमेरिकाको नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स र मोडेर्ना कम्पनीले संयुक्तरुपमा बनाइरहेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अन्तिम चरणको परीक्षण करीब दुई सातापछि शुरु हुने भएको छ। अहिलेसम्मको परीक्षणमा यसले कोरोनाभाइरस विरुद्ध प्रतिरोधात्मक प्रणाली बलियो बनाएको वैज्ञानिकहरुको दाबी छ।
अमेरिकाका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फाउसीका सहयोगीहरुले विकास गरिरहेको खोपको अहिलेसम्मको सबै परीक्षण सफल भएको बताइएको छ। डा. फाउसीले खोप विकासमा पाएको सफलता शुभसमाचार भएको र यसले कुनै नराम्रो असर नगरेको दाबी गरेका छन्।
अहिलेसम्म गरिएको परीक्षणमा यो खोपले कोरोनाभाइरसविरुद्धको प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गरेको छ। अन्तिम चरणको परीक्षण २७ जुलाईदेखि सुरु हुनेछ। यो चरणमा करीब ३० हजार व्यक्तिमा खोप परीक्षण हुनेछ। त्यति वेला खोप वास्तवमै कोरोनाभाइरसविरुद्ध प्रभावकारी र स्वास्थ्यका लागि सुरक्षित छ\_छैन अध्ययन हुनेछ।
अनुसन्धानकर्मीले मंगलबार बताए अनुसार शुरुआती चरणमा ४५ जना स्वयमसेवीलाई खोप लगाइएको थियो। उनीहरु प्रत्येकले खोपको दुई/दुई डोज लिएका थिए। त्यसले उनीहरुको शरीरमा भाइरस मार्ने ‘एन्डीबडी’ को उच्च विकास गरेको थियो।
कोही पनि स्वयमसेवीलाई गम्भीर प्रकारको ‘साइड इफेक्ट’ नभएको, तर आधा जतिलाई सामान्य वा मध्यम प्रकारको प्रतिक्रिया देखिएको थियो। तीमध्ये केहीलाई टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने, कमजोरी हुने र खोप लगाएको ठाउँ आसपासको मांशपेशी बाउँडिने वा दुख्ने भएको थियो।
काभिड–१९ विरुद्धको खोप मान्छेमा परीक्षण गर्ने मोडेर्ना पहिलो कम्पनी हो। यसले १६ मार्चमा पहिलोपटक मान्छेमा खोप परीक्षण गरेको थियो।